Coating - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax dia hampihatra Coating amin'ny fivoriambe PCB isaky ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny fizotran'ny firakotra mazàna dia zava-dehibe amin'ny fiarovana ireo takelaka amin'ny hamandoana sy ny loto (izay mety hiteraka famoahana herinaratra). Ireo vokatra ireo dia ampiasaina amin'ny fampiharana ny hamandoana toa ny fandroana, lakozia, fampiharana ivelany… sns.
Fumax dia manana mpiasa matihanina sy fitaovana ho an'ny coating
Coating dia sarimihetsika mitohy azo avy amin'ny fampiharana coating indray mandeha. Izy io dia sosona plastika manify mifono amin'ny substrate toy ny vy, lamba, plastika, sns ho fiarovana, insulation, haingon-trano ary tanjona hafa. Ny gazy dia mety ho etona, ranoka na mivaingana. Matetika, ny karazana sy ny toetran'ny fanosotra dia voafaritra arakaraka ny substrate hofafazana.
1. Fomba indrindra:
2. Tsy mandeha amin'ny herinaratra Ni / AU
3. Tinso fanitrihana
4. OSP: Oragnic Solderability Preservative
2. Ny fiasan'ny coating:
Arovy amin'ny hamandoana sy ny loto (izay mety miteraka famoahana herinaratra);
Manohitra ny famafazana sira sy ny ahitra;
Manohitra ny harafesina (toy ny alkaly), manatsara ny fanoherana ny famongorana sy ny fifandirana;
Hatsarao ny fanoherana ny havizanana amin'ny tadin'ny solder tsy mitarika;
Arovy ny fivoahan'ny arko sy ny halo;
Ahena ny fiantraikan'ny hovitrovitra mekanika sy ny hatairana;
Fanoherana ny hafanana avo, famoahana ny adin-tsaina noho ny fiovan'ny mari-pana
3. Fampiharana ny coating:
Fivorian'ny SMT & PCB
Vahaolana fametahana fonosana avo lenta
Vahaolana firakotra PCB
Vahaolana Encapsulation Component
Vokatra sy faritra elektronika azo entina
Fivorian'ny LED sy ny fampiharana
Indostria angovo vaovao
Vahaolana firakotra PCB Board
4. Toetra mampiavaka azy:
Raha ny fizotry ny firakotra ambonin'ny PCB dia miatrika hatrany ny fanamby amin'ny fampifandanjana ny vokatra, ny fitaovana, ny fampiasam-bola ary ny fiarovana ireo mpanamboatra PCB. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy dinihin'izy ireo ny olana momba ny lalàna sy ny tontolo iainana tafiditra amin'izany. Ny fomba fanaronana nentim-paharazana, toy ny fandrorohana sy ny famafazana ny basy amin'ny rivotra, dia mazàna mitaky fitaovana avo lenta (fidirana sy fako) ary ny vidin'ny asa (fiarovana ny asa sy fiarovana ny mpiasa betsaka) Mampitombo ny vidiny ny fitaovana manarona tsy misy solvent.
5. Ny tombony amin'ny coating:
Haingam-pandeha ny hafainganam-pandeha tanteraka.
Maharitra sy azo itokisana.
Ny fahamendrehana mifantina tsara (famaritana ny sisiny, ny hateviny, ny fahaizany) azo tratrarina.
Ny rindrambaiko dia manohana ny fanovana ny maody famafazana amin'ny fanjakana sidina, ary ny fahombiazan'ny famafazana dia ny fahombiazan'ny famafazana avo.